१.न. प्रदेशका योजना छोटो समयमा उल्लेख्य प्रगति - Sagarmatha Online News Portal
१.न. प्रदेशका योजना छोटो समयमा उल्लेख्य प्रगति
फिदिम । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ बाट पाँचथरमा सञ्चालित पूर्वाधार विकासका योजनामा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित पूर्वाधार विकासका अधिकांश योजनामा छोटो समयमै उल्लेख्यरूपमा भौतिक र वित्तीय प्रगति देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले पाँचथर र ताप्लेजुङमा गरी ७४ पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गरेको थियो । यीमध्ये ५० योजना गत आर्थिक वर्षमै पूरा गर्नुपर्ने थिए । गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनामध्ये दुवै जिल्लामा दुई÷दुई योजना मात्रै पूरा गर्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरका प्रमुख भरतकुमार यादवले बताए । निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये एउटा योजना मात्रै उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएको र बाँकी सबै ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माणकार्य सम्पन्न गरिएका छन् ।
दुई जिल्लाका ७४ योजनामध्ये १५ योजना क्रमागत योजनामा रुपान्तरित भएका छन् भने नौ योजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासमेत लागिसकेको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यालयले ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रु चार करोडको अख्तियारी प्राप्त हुँदा कार्यालयको वित्तीय प्रगति पाँच प्रतिशतले कम देखिएको यादवको भनाइ छ ।
कार्यालयका प्रमुख तेजबहादुर तुम्बापोका अनुसार गत वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकूदका २३ योजना सञ्चालित थिए । यी सबै योजना उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएका थिए । वैशाखमा योजना सञ्चालनका लागि अख्तियारी प्राप्त भएकाले हतारमा योजना सम्पन्न गर्नुपरेको तुम्बापोको भनाइ छ । यीमध्ये केही योजना आर्थिक वर्ष समाप्त भइसक्दा समेत निर्माणकार्य जारी राखेर पूरा गरिएको उहाँले बताए ।